နှာထျာန်တဲ့ဘွားတော် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 30, 2021 Author admin	Comments Off on နှာထျာန်တဲ့ဘွားတော်
ဒေါ်နီလာ…. သူမ ကို တောင်ကြီးမြို့ —- ရပ်ကွက် တခုလုံး မသိသူ မရှိ။ နှုတ်ကြမ်း လျှာကြမ်း နှင့် တိုင်းရင်းသား အမျိူးသမီး တဦးပင်..။ အိမ်ထောင်3ဆက် ကျဖူးပီး ပထမ အိမ်ထောင် နှင့် သားသမီး မထွန်းကား၊ ဒုတိယ အိမ်ထောင် နှင့် သမီး2ယောက်မွေး၊ နောက်ဆုံး အိမ်ထောင်နှင့် လဲ သမီး တယောက် မွေးသည်။ ပုံစံ က တော့ အပြင်ပန်း အရ ကြည့်လျှင် ရိုးရိုးအေးအေးပင် အသက် 50 ဝန်းကျင် အရွယ်ခန့် ရှိပီး အလှအပ ကြိုက်သူ ဟု ဆိုရမည် ။ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ဦး ကျော်ဆန်း မှာ အသက် 60 အရွယ်ခန့် ရှိပီး အနေအထိုင် အေးဆေးလှသည်။ အရင် အိမ်ထောင် နှင့် သမီးများ မှာ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျပီး အဝေးမှာ ရှိနေသဖြင့် သမီး အငယ်ဆုံး လေး ရွှေရည် နှင့်ပင် အတူနေထိုင်သည်။ ရွှေရည့် ခင်ပွန်း ဇော်မင်း မှာ အသား ခပ်ညိုညို ၊ ဗလတောင့်တောင့် အပြင်ပန်း ကြည့်လျှင် ယောက္ခမ ဒေါ်နီလာ ကို အလွန်ရိုသေသူ အဖြစ် ပုံဖမ်း နေသော်လည်း စိတ်ထဲ တွင်တော့ ဒေါ်နီလာ့ ဖင် ၊ စောက်ဖုတ်၊ ပါးစပ် ကို နည်းမျိူးစုံ ဖြင့် ပစ်မှားနေသူ တယောက်ပင်၊ မပြစ်မှားဘဲ နေနိုင်ရိုးလား။ သူလဲ အပြာဆိုဒ် က စာတွေ ဖတ်တာ များပီး ဖြစ်နေတာကိုး။ တရက် ဇော်မင်း အခန်းထဲတွင် လဲလျောင်းပီး ညီလေး ကို ဆော့ကစား နေခိုက် ” သားရေ..သမီး။ မေမေ ပစ္စည်း တခု ယူချင်လို့ ” ဟု ဆိုကာ မပြောမဆို နှင့် အခန်းတံခါး ဖွင့် ကာ ဝင်လာတော့သည်။ ရွှေရည် က မရှိ..toilet ခဏ သွားနေသည်။ မိန်းမ ကို လိုးကာနီး ညီတော်မောင် ကို ဆွပေးနေသည့် ဇော်မင်း မှာ အလျင်အမြန် စောင်နှင့် ပြန်ဖုံးလိုက်ရသည်။ စောင်အောက်က ကောင် ကား ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေသည်ကိူတော့ သေချာပေါက် ဒေါ်နီလာ…။ စိတ်ထဲတွင်တော့ ” အဘွားကြီး လီး ကြည့်ချင်ခို့ ဝင်လာတာနေမယ်။
နို့တွဲ ကြီး ငုံပီး စောက်ဖုတ် ကို ဗျင်းထည့်လိုက်ရရင်တော့..” ဟု တွေးနေမိသည်။ … ဒေါ်နီလာ က နှယ်နှယ်ရရ တော့ မဟုတ်။ အိမ်ထောာင်3ဆက် ကျဖူးသလို သူမ ယောက်ျား ဘာမှ မဘာနိုင်တော့သည့် အချိန်တွေက ဖောက်ပြန်ခဲ့သည် လို့ လူတွေက တစွန်းတစ သိထားကြသည်။ သူမ FB acc ..Nilar Moe တွင်လဲ ပုံများ ကို လှပအောင် ရိုက်ပီး တရက်တမျိူး မရိုးရအောင် တင်နေသူ ဖြစ်ရာ လီးဆာနေတယ့်သူ…လို့ ပင် ဇော်မင်း စိတ်ထဲ နားလည်ထားလိုက်တော့သည်။.. … မှောင်ရီဝေသော ညနေခင်းတခု ” ဒုန်း..ခလွမ်..လွမ် ” ” သားရေ..ဇော်မင်း လာပါဦး ” စတိုခန်း ထဲက အသံများ ကြားသဖြင့် ဇော်မင်း ပြေးထွက်လာခဲ့သည်။ ဒူးထောက် ထိုင်နေငည့် ဒေါ်နီလာ က ပန်းကန်စင် ပြိုကျမှာစိုးသဖြင့် အောက်ခြေကို မနည်း ထိန်းထားရသည်။ ပန်းကန်စင် ကလဲ6ပေခနိ့ မြင့်သည့် စင်။ အပေါ်ပိုင်း က တန်ဖိုးကြီး ပန်းကန်များ၊ အလှအပ အရုပ်များ ကို လွတ်ကင်းရာ ရွှေ့ပြောင်းရင်း ပန်းကန်စင် ကို ငြိမ်အောင် ပြန်ရွှေ့။ အိမ်နေရင်း အဝတ်အစား နဲ့ ဆိုတော့ လူ က အောက်ခံ မပါ ၊ ပုဆိုးပါးလေး နှင့် ဆိုတော့ စင်ကြီး ကို ရွှေ့နေစဉ်အတွင်း ဒူးထောက်ထားငည့် ဒေါ်နနီလာ ပါးစပ်က ကိုယ့် ငပဲ နားမှာ။ ရွှေ့ရင်း နဲ့ မျက်နှာ ကို တမင်သတ်သတ် ဂွကြားနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ သေချာတာကတော့ သူရော၊ ဒေါ်နီလာ ပါ လိင်စိတ်တွေ နိုးကြွလာလေတော့သည်။ ဒေါ်နီလာ ပါးစပ်က ပါ သေချာ ကိုယ့်ဂွကြား လာကပ်နေတော့ ဇော်မင်း လဲ မသိမသာ နှင့် ပုဆိုး ချွတ်ချလိုက်တော့သည်။ ဘွားကနဲ ထွက်လာသော ညီတော်မောင် ကား အရှည်6လက်မ ခန့်၊ လုံးလုံးတုတ်တုတ် ညိုမဲမဲ ကြီး ဒေါ်နီလာ အနီးကပ် မြင်တွေ့လိုက်ရသော သမက် ဖြစ်သူ၏ လီး ကို အံ့သြ လန့်ဖြန့် သွားသ လိုပင်။ ကောင်လေး ကြည့်တော့သာ အေးသလိုလို နှင့်၊ မိမိ ကို လိုးချင်စိတ်ဖြင့် လီးကြီး အစွမ်းကုန် ထောင် ထ နေပါလား ဆိုသော အတွေး နှင့် အတူ စောက်ဖုတ်ထဲ တွင် စိုစွတ်လာတော့သည်။
သမက် ၏ လက်နှစ်ဖက်ကား မိမိ ခေါင်းကို ချူပ်ပီး သူ့ လိင်တံ ကို အတင်း စုပ်ခိုင်း နေတော့သည်။ လက် ဖြင့် ဂွေး ဥ နှစ်လုံး ကို ပွတ်ချေ ပေးပီး ဒေိါနီလာ လျှာဖျားဖြင့် ဒစ်ထိပ် ကို ကစားပေးလိုက်သည်။ ပါးစပ်လေး ဟ ပေးထားတော့ သမက်လီးကြီး က အလိုက်တသိပင် ဝင်လာတော့သည်။ ကျွမ်းကျင်ရာ မနေသာ ဆိုတယ့် အတိုင်း ဒေါ်နီလာ တို့ ပုလွေ အစွမ်းပြလေပြီ။ အသက် 50 အရွယ် ယောက္ခမ ကြီး လီးစုပ်ကျွမ်းကျင် မှု ကြောင့် ဇော်မင်း မှာ လူ့ဘဝ ရဲ့ နိဗ္ဗာနိ ကို ရောက်နေသလိုပင်။ သူမ အနေနှင့်လဲ ချိူချ၍် မစားရတာ ငါးနှစ်လောက် ကြာသည့် ကလေး….ခုမှ ချိူချဉ် ရပီး အားရပါးရ စုပ်နေသလိုပင်။ စတိုခနိးလေးထဲ မှာ ရှလွတ်..ပြက်ပြက် ဆိုသည့် လီးစုပ်သံများ ညံညံစီနေတော့သည်။ “ကျွီ..ဒုံး ” အပြင်သွားနေသည့် မိန်းမဖြစ်သူ ရွှေရည် ပြန်ရောပ်လာသံ ကြားလိုက်ရသဖြင့် ဇော်မင်းရော၊ ဒေါ်နီလာပါ ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်သွားသည်။ ဇော်မင်း လဲ ပုဆိုးအမြန်ကောက်ဝတ်ပီး အိပ်ခန်း ဆီသို့ သုတ်ခြေတင်ရသည်။ ကျန်နေခဲ့သော ဒေါ်နီလာ မှာ ပါးစပ်မှာ တံတွေး ဗရပွ နှင့် စတိုခနိးထဲတွင် ကျန်ခဲ့တော့သည်။ စုပ်လပ်စ ရေခဲခေောင်း လုခံလိုက်ရသည့် ခံစားချက်မျိူး…။ ” ဟေး.. မိနိးမ၊5ခွဲလောက် မှ ပြန်လာမယ် ထင်နေတာ ” ” ဟုတ်တယ်.. ကို ရေ။ ဝယ်မရတယ့် ပစ္စည်းတွေ များနေတာနဲ့ ပြန်လာခဲတာ့..အမေ ကရော ” ” မသိဘူး..။ စတိုခန်း ထဲ ပစ္စည်း တွေ ရှင်းနေမယ် ထင်တာဘဲ” ” အမေရေ…အမေ ” ” အေး..သမီး။ ပြန်ရောက်ပြီလား၊ မေမေ လဲ အရှုပ်တွေ ရှင်းနေတာ ” ” အမေကလဲ ကိုဇော် ကို ကူခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ သူက ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်တော့ အားနေ ဂိမ်းဘဲဆော့နေတာ ” ” ရပါတယ် သမီးရယ်။ နားပါးစေ ” ဒေါ်နီလာ့ စိတ်ထဲတွင်တော့ “အမယိလေး နင့်ယောက်ျား ကို ကူခိုင်းတာ သူ့လီးမဲကြီး ပါ ငါ့ ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပီး စုပ်ပေး လိုက်ရတယ် ” ဟု ပြောနေမိသည်။
” ဟင်.. အမေ။ ပါးစပ်တွေလဲ တံတွေး တွေ ပွလို့။ ဘာတွေ စားထားတာလဲ ” ” ခုနက ဘဲ အိမ်ရှေ့ မှာ ရေခဲချာင်းကား လာလို့ တချောင်းလောက် ဝယ်စားကြည့်တာပါအေ။ ရေခဲချောင်း မစုပ်ရတာလဲ ကြာပြီကိုး ” ဟု ဒေါ်နီလာ မလုံမလဲ နှင့် ဖုံးဖိ လိုက်ရသညိ။ ….. မပြီးမပြတ် ဖြစ်သွားသည့် ဇော်မင်း မှာကား အခန်းထဲတွင် လီးကိုင်ပီး မိန်းမကို စောင့်နေတော့သည် မကြာခင် ရွှေရည် ဝင်လာပီး တဖုန်းဖုန်း တဒိုင်းဒိုင်း..ဗြွတ်စ်..ပလွတ် အသံများနှင့် လိုးပွဲကြီး ဆင်နွှဲလေတော့သည်၊ ယောက္ခမ ကြားအောင် တမင် ကို လိုးပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်း အပြင်ဘက်ရှိ ဒေါ်နီလာ မှာကား စောက်ဖုတ်ကြီး ကို လက်နှစ်ဖက် နှင့် ကလိပီး အခန်းအနီးမှာ မယိုးမယွ ဖြစ်နေလေတော့သည်။ နောက်ရက် မနက် ရောက်တော့ နှစ်ဦးသား ရင်ဆိုင်တွေ့ရာ ဒေါ်နီလာ မှာကား ရှက်ရွံ့သလိုလို၊ ဇော်မင်း က ဘေးဘီ ဝဲယာ ကို တချက်ရှိူးရင်း ဒေါ်နီလာ့ ဖင်ကို တချက် ဆုပ်နယ်လိုက်လေတော့သည် ” ဟဲ့…ငဇော် ။ သမီး မြင်ကုန်မယ်။ ဖယ်စမ်း ” ဟု ပြောရင်း ပြေထွက်သွားလေတော့သည်။ စ တယ့် ဇာတ်လမ်း.. ကို အဆုံးသတ်အောင်မြင်တယ့်ထိ လုပ်ရမယ်…လို့ စာတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးသည်။ ယောက္ခမ ကြီး၏ viber acc ကို ဇော်မိုး ရိုက်ထည့်ပီး hi..အန်တီ.. ဟု စာ ပို့လိုက်သည်။ ဟိုဘက် က ချက်ချင်း စာပြန်လာသည်။ ” ဘယ်သူလဲ ” ဇော်မင်း viber acc က တခြား ဖုန်းနံပါတ် တခု နှင့် ဖွင့်ထားတာကိုး ” ဘယ်သူ လဲ သိချင်ရင် လီးစုပ်ပေးမလား။ ပြောပြမယ်လေ ” ” ခွေးသူတောင်းစား၊ ငါ့ ကို ဘာကောင်မ မှတ်နေလို့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း လာပြောတာလဲ ၊ နင် ဘယ်သူ လဲ ပြောစမ်း ” ” ဘယ်သူ လဲ သိချင်ရင် ဒီ လီးကြီး သာ ကြည့်ကြည့် ၊ လူ ကို မှတ်မိလာလိမ့်မယ် ” ဟု ဇော်မင်း လဲ ပြောရင်း သူ့ငပဲ ပုံ ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက် ပို့လိုက်လေသည်။ ” သား ရယ်၊ မနေ့က အန်တီ တို့ ဖြစ်ခဲ့တာ မသင့်တော်ပါဘူး။
အန်တီ ဆိုတာလဲ သားမိဘ အသက်အရွယ် ပါဘဲ။ ထပ်မမှားသင့်ဘူး ထင်တယ်ကွယ် ” ” ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ။ ခုချက်ချင်း ကိုယ်တုံးလုံး ပုံ ရိုက်ပိူ့ပေး အန်တီ၊ ကျနိတာ ဘာမှ မသိချင်ဘူး ” ” မပို့ပါရစေနဲ့ကွယ်၊ အန်တီ ရှက်လို့ပါ ” ” ရှက်မနေ ပါနဲ့။ ခဗျား လီးဆာနေတာ၊ အရင်က ကောင်လေး တွေကို ကြူပီး ကုန်း မယ် လုပ်ခဲ့တာ၊ လီးနဲ့5နှစ်လောက် ဝေးနေတာ ကျတော် သိပါတယ်။ မြန်မြန်သာ ပုံ ပို့စမ်းပါ ” ” ခက်တော့တာဘဲ၊ မောင်ဇော် ရယ်၊ မင်း က အန်တီမွေးရင် အန်တီ့ သမီးအကြီးဆုံး ထက်5နှစ်လောက်တောင် ငယ်ဦးမယ်။ မသင့်တော်ပါဘူးကွယ်။ ဒီအသက်ဒီအရွယ် ရောက်မှ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပို့ရမှာ ရှက်စရာ လဲ ကောင်းပါတယ် ” ” အပိုတွေ ပြောမနေပါနဲ့ အန်တီရာ၊ အန်တီ ကောင်လေး တွေ ကို ချက်ဘောက် ကနေ ကြူပီး ပုံတွေ ဘာညာ ပို့တာ ကျတော် သိပါတယ်ဗျ။ စတိုခန်းထဲ မှာ အန်တီ လီးစုပ်တယ့် ကိစ္စ ပါ ကျတော်.. ” ” တော်ပါတော့။ မောင်ဇော် ရယ်၊ အန်တီ ပို့ပေးပါ့မယ်၊ ဟုတ်ပီလား ” ဟု ဆိုကာ အောက်ပိုင်း ဗလာကျင်း နှင့် ပုံ တပုံ ကို ပို့ပေးလေသည်။ စွဲမက်ဖွယ်ရာ စောက်ဖုတ်ကြီး…ပါလား ဟု မောင်ဇော် လျှာသပ်မိသည် ယောက္ခမကြီး က လူကသာ မဖွံ့ထွားတာ၊ စောက်ဖုတ်ကတော့ ခပ်မဲမဲ နှင့် အနည်းငယ် ပြဲနေလေငည်။ မပြဲခံနိုင်ရိုးလား၊ ကလေးမွေးထားတာ3ယောက်အပြင် ကြားထဲလဲ ကလေးမကြာခဏ ဖျက်ချဖူးသည်။ သို့သော် ကိစ္စမရှိ၊ အလကားရသည့် နွားတော့ မောင်ဇော် သွားဖြဲကျိမနေတော့.. ၊ ” အန်တီ ပုံတွေ က ရိုးလိုက်တာ ၊ ဖင်ရော အဖုတ်ရော ပေါ်အောင် ရိုက်ပေးကွာ များများပို့ ..၊ ကျတော့် လီးပုံလဲ ပို့ပေးမယ် ” ” ဟင်း…ကောင်ဆိုးလေး ” ဟု ရေရွတ်ကာ ဒေါ်နှနီလာ လဲ မောင်ဇော့် စိတ်တိုင်းကျ ရိုက်ပေးရတော့သည်။ “ဖီးလ်တက်လာပြီဗျာ။ စောက်စိကြီး လက်နဲ့ ကလိနေတယ့် ဗီဒီယိုဖိုင် ရိုက်ပို့်ပေး ” ” အေးဟေ့ ..သေနာလေး ရေ။
တကထဲ အိုကြီးအိုမ ကိုမှ လာလိုးချင်နေတယ် ” ” လူကသာ အိုကြီးအိုမ၊ အန်တီ့စောက်ဖုတ် က အရည်တွေ တောင် ထွက်ကျနေပီ မို့လား ” ဗီဒီယိုဖိုင် ရိုက်ရင်း ဒေါ်နီလာ လဲ ဖီးလိတက်လာသလား မပြောတတ်၊ အဝတ်အစား ကိုယ်လုံးတီး ၊ လက်တဖက် က သူ့နို့သူ နယ်ပီး၊ ကျန်လက်တဖက်နှင့် အစိကြီး ကို ကစားနေတော့သည် မောင်ဇော်လဲ ညီလေး ကို လည်ပင်းညှစ်ရင်း ဖီးလ်တက်ကာ တချီ ပြီးသွားတော့သည်။ ” အိုကေ..အန်တီ၊ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတယ့် တရက် လုပ်ငန်းစကြတာပေါ့၊ viber msg တွေ ဖျက်ထားဦး၊ သူများ မြင်ကုန်မှ နှာထနိတယ့် အဘွားကြီး ” လို့ အတင်းတုပ်ခံနေရဦးမယ်၊ အောက်တော့ ” ဟု ပြောကာ မောင်ဇော် လဲ အလုပ် သို့ ထွက်လာခဲ့ လိုက်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့လည်ခင်းတခု၊ အိမ်မှာ ဘယ်သူ မှ မရှိ၊ ရွှေရည် က စာရင်းစစ် ဘာညာ ခေါင်းရှုပ်သဖြင့် ဗျူတီပါလာ သွားမည် ဆို၍ လိုက်ပို့ခဲ့ရသည်။ နောက်3နာရီ နေရင် ပြန်လာခေါ်မယ်။ ဘီယာဆိုင်သွားမယ်..ဟု ဖြီးခဲ့ပြီး မောင်ဇော် အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ အကြံနှင့်ကိုး။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ယောက္ခမ ကြီး က မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ပန်းကန်ခွက်ယောက် တွေ စီနေသည်။ အမယ် ဘယ်ဆိုးလို့လဲ၊ နောက်က ကြည့်တော့လဲ အိုးကြီး က ရွဲရွဲအယ်အယ် ကြီးပါလား ဟု တွေးရင်း တိတ်တိတ်ကလေး ခါး ကို ဖက်လိုက်တော့သည်။ ” ဟဲ့..ဘယ်သူလဲ။ သြော်..ငါ့နှယိ။ ဖယ်ပါ..မောင်ဇော်ရယ် ” မောငိဇော်ကား မလွှတ် ၊ နိူ့ကြီး နှစ်လုံး ကို လက်တဖက်ဖြင့် ဖိထားရင်း ကျန်လက်ဖြင့် ဒေါ်နီလာ၏ ထမီ ကို ချွတ်ချလိုက်တော့သည်။ ထမီ အောက်မှာ စပ်စမိုင်နာ အနက် ဖြင့် ဖွေးဥနေသော ပေါင်တံတစုံ။ လက်သွက်သည့် မောင်ဇော် ကြောင့် တမိနစ် မပြည့်ခင်မှာဘဲ ဒေါ်နီလာ မှာ မိမွေးတိုငိး ဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားတော့သည်။
စိတ်ထဲလဲ ရှိန်းကနဲ..ဖိန်းကနဲ..။ ကောင်လေး ကလဲ ကြမ်းလိုက်တာ ဟု စိတ်ထဲ ပြောနေမိသည်။ ” ဘေစင် ကို လက်ထောက်ထားလိုက် အန်တီ၊ ခါးနည်းနည်း ကော့ထားပေး ” ဟု ပြောရင်း လက်တဖက် ဖြင့် ဒေါ်နီလာ့ နို့ ကို နယ်၊ ပါးစပ်ဖြင့် ကျန်နို့ ကို စို့ပေးရင်း… အားနေသော လက်တဖက် ဖြင့် မူကား လက်ညှိူး က အဖုတ်ထဲ…လက်မ က ဖင်ထဲ နှိုက် ကာ ကလိပေးနေတော့သည်။ “,အရည်တွေ တေိာတော် တောင် စီးကျနေပီ၊ လီး နဲ့ ဝေးနေတာ အတော်ကြာပြီဘဲ ဟုတ်လား ” ဟု ပြောရင်း ပုဆိုးကို အမြန်ချွတ်ချကာ လီးဆွဲပီး အဖုတ်ဝ ကို တေ့လိုက်သည်။ “နေဦး… အဖုတ်က ခဗျား က အရင်ကလဲ လင်များ၊ ရိုးရိုးမွေးတာ လဲ3ခါဆိုတော့ တော်တော် ကျယ်နေမှာဘဲ ” ဟု မောင်ဇော်က ပြောရင်း Berman သွားတိုက်တံ အဖုံး ထဲ က တခုဖြုတ်ပီး ကို ယူပီး ဒေါ်နီလာ့ ဖင်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်သည်။ အစ ပထမတော့ မဝင်၊ အနီးအနား က ပဲဆီပုလင်း လေး နဲ့ ဖင် ကို ကလိုင်း ပေးလိုက်မှ ဝင်သွားတော့သည်။ “,အား ကျွတ်..ကျွတ် ” ငြီးငြူသံက နာကြဉ်တာလိုလို၊ ဖီးလိတက် တာ လိုလို မောင်ဇော်လဲ လီးကြီး နှင့် စောက်စိ ကို3ချက်လောပ် ကစားပေးပီး အဖုတ်ထဲ ကို ထည့်လိုက်တော့သည်။ ဝိုး..ဂွတ်ရှယ် ပါဘဲ။ ဒေါ်နီလာ့ ဖင်ထဲ ကို တန်ဆာ တခု ထည့်ပေးထားတော့ စောပ်ဖုတ် က အပျိူ ကို လိုးရသလိုပင်၊. ကြပ်ကြပ်ထုတ်ထုတ် ရှိလှသည်။ မောင်ဇော်လဲ အရှိန် တက်လာရင်း ဒေါ်နီလာ့ ဆံပင် ကို ဆွဲပီး အသားကုန် ကြုံးတော့သည်။ မှောင်ရိပ်ခပ်ကျကျ မီးဖိုချောင် ထဲတွင် အသက်50 အရွယ် မိန်းမကြီး မှာ ဘေစင် ကို လက်ထောက်လျက် မတ်တပ်ရပ်ရင်း သားမက်ဖြစ်သူ ၏ အလိုး ကို လူးလိမ့်နေအောင် ခံရတော့သည်။ ” အ..အင်း..အင်း..။ သား ။ ချ စမ်းပါ။ ဒီထက် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး။ ” ဗြွတ်..ဘုတ်..ဘပ်..ဘပ်..မြည်အောင် ဆော်ရငိး၊ ဒေါ်နီလာ့ ဆံပင် ကို ဆွဲပီး မောင်ဇော် လဲ နွားသိုးကြိုးပြတ် လိုးနေတော့သည်။ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို လိုးရင်း လက်တဖက်ဖြင့် စောက်စိ ကို ကစားပေးတော့ ဒေါ်နီလာ မှ အရူးတပိုင်း လို ဖြစ်လာသည်။
” ချစမ်း…စောက်ဖုတ် က ဒီထက် ပိုပြဲစရာ မရှိတော့ဘူး၊.. ဒီထက့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ချပေး ” ” အန်တီ ကတော့ မနိုင်စိန်ဘဲ။ လီးတချောင်း ထဲ လိုးတာ အားမရ ဘူး ထင်တယ် ” ” အေးဟေ့..အခု ဖြစ်နိုင်ရင် ဖာသည် တောင် ဖြစ်ချင်တယိ။ စကားများ မနေနဲ့တော့.ပြီးတော့မယ်၊ မြန်မြန်လေး ” ဟု ဆိုရင်း ဒေါ်နီလာ့ လက်ချောင်းများမှာ ဘေစင် ကို ကုတ်ခြစိနေတော့သည်။ မောင်ဇော် လဲ ဒေါ်နီလာ့ ဆံပင် ကို ဆောင့် ဆွဲပီး အဖုတ်ကြီးကို တရစပ် ကျူံးတော့သည် ဒေါ်နီလာ့ဖင် နှင့် မောင်ဇော့် ဆီးခုံ ရိုက်သံ၊ အရည်တရွှမ်းရွှမ်း ဖုတ်ကြီးထဲ လီးမဲကြီး ဝင်သံ တို့မှာ ဆူညံပွက်လော ရိုက်နေတော့သည်။ “ကျတော် ပြီးတော့မယ်…အား…အား ” ဟု ရေရွတ်ရင်း ဒေါ်နီလာ့ နိ့သီးနှစ်ခု ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ချေပေးလိုက်သည်။ လရေ များကား၊ ဒေါ်နီလာ ဖုတ်ထဲ အပြည့်၊ ပါးစပ်ထဲက တောင် ပြန်ထွက်တော့ မလား အောင့်မေ့ရသည်။ လရေ ထုတ်ပီး ခဏ နားနေလိုက်သည်။ ကြမ်းပြင်မှာကား ဖြူဖြူဖွေးဖွေး လရေ၊ စောက်ရေ တွေ အိုင်ထွန်းလို့ ဒေါ်နီလာ့ ပေါင်မှာလဲ သုတ်ရည် စီးကြောင်းကြီး… ဖင် ထဲ ကို ဘားမန်းသွားတိုကိတံ ဘူး စိုက်လျကိသား ဖြင့် ဒေါ်နီလာ မှာကား ယိုင်တိုင်တိုင် ရပ်လျက် ” နေဦး.. အန်တီ။ မပြီးသေးဘူး။ သုတ်ရည် တွေ ကို လျှာ နဲ့ ရပ်ပြ၊ ” ” မလုပ်ပါရစေနဲ့ သားရယ်၊ ရွံစရာကြီး ” . ” ဟာ အန်တီ ကလဲ ကော်ဇော်က မနေ့က မှ လဲထားတာ၊ ခုမနက် လဲ ရွှေရည် တံမြက်စည်း လှည်းထားခဲ့သေးတယ် ” အင်းပါ..ဟု ရေရွတ်ရင်း ဒေါ်နီလာ လဲ ကြမ်းခင်းပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်ရင်း သုတ်ရည် များကို လင်လေး အလိုကျ ယက်ပေးလိုက်တော့သည်။ ဖင်ထဲမှာ တန်ဆာ အတု ထည့်လျက် ဖင်ထောက်လျက်သား သုတ်ရည် ကုန်းယက်နေသော ယောက္ခမ ၏ ရှူမငြီးဖွယ် ခပ်ဟော့ဟော့ ပုံများ ကို မောငိဇော် မသိမသာ ဖုန်းနဲ့ ရိုက်နေတော့၏ ။ “,ကဲ…အန်တီ အဝတ်အစား ဘာညာ ဝတ်ထားတော့ ၊ ကျတော် ရွှေရည့် ကို သွားကြိုလိုက်ဦးမယ်၊ နောက်ခါ ခဗျားကို ဖင်ဆော်မယ် ၊ ခံနိုင်အောင် ကျင့်ထား ” ဟု ပြောရင်း မောင်ဇော်လဲ အဝတ်အစား ပြန်ဝတ်ပြီး ထွက်ခဲ့လိုက်တော့သည် မောင်ဇော် ထွက်သွားတော့ ဒေါ်နီလာ တယောက် မောဟိုက်စွာ ကျန်ခဲ့သည်။
စောက်မွှေးများ ဗရပွပေါက်နေသော စောက်ဖုတ်အပေါက်ကြီးကား ဟ စိ ကြီးဖြစ်လျက် ၊ လူကား ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်နှင့်၊ ” အတော်ဆိုးတယ့် သမက်ပါလား၊ ယောက္ခမ က အသက် 50 ကျော်နေတာ ကို လေးစားမှု မရှိ.. လိုးသွားတယ် ” ဟု မဲ့ရွဲ့ကာ ရေရွတ် လိုက်တော့သည် စိတ်ထဲတွင်တော့ ကျေနပ်နေသလိုလို ၊ လင်ဖြစ်သူ ကား အသက်ကြီး သဖြင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်သဖြင့် ကာမအရသာ မခံစားရသည်မှာလဲ ကြာပြီကိုး သမက်ဖြစ်သူ မှ ” ဖင်ပါ လိုးမယ်၊ ခံနိုင်အောင် ကျင့်ထား ” ဆိုသည့် စကား ကိုတော့ အတော်လန့်မိပေသည်၊ အို..စလေတယ့် ဇာတ်လမ်း ဆုံးအောင် ဆက်လျှောက်ရမှာဘဲ…ဟု ဖြေသိမ့်လိုက်တော့သည်၊ …. ဒေါ်နီလာ ကို အုပ် လိုက်ရတာ အတော် ဖီးလ်ရှိပေသည် အဖွားကြီး ရဲ့ အရင်က ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားဖူးနားဝ ရှိသည်၊ အိမ်ထောင်ဆက် များသု၊ ခြေရှုပ်တတ်သူ၊ ဖေ့ဘွတ် အကောင့်ဖွင့်ပြီး ကြူတတ်သူ.. ဘာညာ ပေါ့ ဒီလိုမျိူး ကို စားချင်နေတာ ကြာခဲ့ပြီ၊ ယခုမူ မိမိ အလို ပြည့်ဝသွားပြီလေ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ကျားအင်္ဂါအတု တွေ ဝယ်ရမယ်၊ ယောက္ခမ ကို မျက်နှာဖုံးတပ့် သူမ၊ ဖင်ပေါက်ထဲ ကို တပ်ပီး ဆော်မည်..ဟု တွေးရင်း မောင်ဇော် လီးပြန် တောင်လာပြန်သည် . ဒါမှ သူမ ဆန္ဒ ပြည့်ဝမှာ ဖြစ်သည် မိန်းမ ရှိရာ ဗျူတီပါလာထဲတော့ ထောင် ထောင် ထောင် ထောင် နဲ့ ဝင်သွားလို့ မဖြစ်ပြန် အင်း…စိတိထိန်းဟ…ရောက်ခါနှီးပီဟု တကိုယ်ထဲ ရွတ်ရင်း..အတွေးများ အခြားဆီသို့ ပြောင်းလိုက်ရတော့သည် … ” ကိုရယ်၊ ကြာလိုက်တာ၊ ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ဒီမှာ ပျင်းလို့သေတော့မယ်၊ ကောင်မလေးတွေ နဲ့ စကားပြောရင်း စောင့်နေရတာ ” ” အင်း..အချစ်ရယ်၊ ကား က အရေးထဲ စက်နှိူးမရလို့ ကြာ နေတာ ပါ ” ” ပြီးရော.. သွားကြမယ် ” ..ဟု ရေရွတ်ရင်း ဗျူတီပါလာ ဆိုင်မှ မောင်းလာကြတော့သည်။
ကားမောင်းနေရင်း တဖက်. မိန်းမ ပေါင်ကြား ကို လှမ်းနှိုက်လိုက်သည် ” အို…ကိုကလဲ..ကား ကို စိတ်ပါပါ မောင်းစမ်းပါ ” ” အချစ်ပလေး က အရမ်းလှနေတယ်ကွာ ” ” တော်စမ့်းပါ၊ အပိုတွေ ” ” တကယ်..ငါ့ အသဲရာ၊ လာဦး..ကိုကို့ ရေခဲချောင်းကြီးကို စုပ်ပေးဦး “..ဟုဆိုကာ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ညီလေး ကို အပြင်ထုတ်ပေးလိုက်သည်၊ မိမိ မျက်နှာ တခုစာမျှရှည်သော လီးအား ..အသံများထွက်အောင် စုပ်လိုက်၊ ဥ နှစ်လုံးအား ကိုက်ပေးလိုက်နှင့် ရွှေရည်လဲ လင့်အလိုကျ ဖြည့်ဆည်းပေးရတော့သည် ” ရပြီ၊ အသဲ..တော်ပြီ၊ ကိုကို ထွက်ကုန်တော့မယ်၊ ထွက်လို့ မဖြစ်သေးဘူး၊ အိမ်ကျမှ ချစ်စခန်း အားရပါးရ ဖွင့်ကြမယ်၊ ရှေ့နားက ဆိုင်တခု ရောက်ရင် ABC3ပုလင်းလောက်ရယ် ၊ ငါ့မိန်းမ သောက်ချင်တယ့် ဝိုင် တခုခု ရယ် ဆင်းဝယ်ပေးဦး၊ ဒီနေ့ အမုန်းကဲ ကြမယ်၊ ” ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ် ” ဟု ပြောရင်း ရွှေရည်လဲ.. စိတ်များ ထ လာတော့သည်” တီတီ…..” ဟွန်းသံလေး ပေးရင်း ကားမှာ ခြံထဲသို့ ဝင်လာခဲ့လေသည် ” အမေတောင် ဘယ်သွားလဲ မသိဘူး၊ နေ့ခင်း တရေးတမော အိပ်နေတာ ထင်တယ် ” မိန်းမဖြစ်သူ၏ အမေးကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ရင်း မောင်ဇော့် စိတ်ထဲ plan များ ချနေမိသည်၊ မိန်းမကို အမုန်းဆွဲမည်၊ မူးအောင်တိုက်ပြီးရင် ဧည့်ခနိးထဲ ခေါ်ထုတ်၍ သူ့အမေ မြင်အောင် လိုးပြမည်.. ဘာညာ ပေါ့ .. ” ကိုရေ…အမေ ရှိတယ်ထင်တယ်နော်၊ သိပ်အသံထွက်လို့ မဖြစ်ဘူး၊ ” ” မရှိလောက်ပါဘူး အချစ်ရဲ့ ၊ အပြင်သွားတယ့် ပုံ ဘဲ၊ ဘာအသံမှ မကြားဘူး ၊ ကဲပါ စလိုက်ရအောင်၊ ” ဟု ပြောရင်း ABC ပုလင်း အဖုံး ကို ဖွင့်လိုက်လေ၏၊ ရွှေရည်လဲ ထမီ ကို ဖြေလျှော့လျက် ကြမ်းပြင်ပေါ် ဂွင်းလုံး ပုံချလိုက်၏၊ အကျီ င်္ ကို ချွတ်ပြီးသော် ခပ်ဆူဆူ နို့ကြီး နှစ်လုံးမှာ ပေါ်ထွက်လာ၏၊ ပွဲမစခင် ထုံးစံအတိုင်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်၍ ယောက်ျား ကို ပုလွေ ပေးလိုက်သည်။
သူမ စုပ်နေသော လီးကြီးသည် လွန်ခဲ့သည့် တနာရီ ကမှ သူမအမေ စောက်ဖုတ်ကို ဆော်ခဲ့သော လီးကြီး ဖြစ်နေမှန်း ယောင်လို့တောင် မသိရှာပေ၊ မောင်ဇော် ခမျာ လဲ ” ABC ပုလင်း ကို လက်က တဖက်၊ စီးကရက် ကို လက်ကတဖက် နှင့် မိန်းမ၏ လီးစုပ်ပေးတာ ခံရင်း ဇရပ်မင်း စည်းစိမ် ခံစားနေတော့၏၊ ” ရပြီ၊ အသဲရေ၊ ကိုကို ထွက်ကုန်လိမ့်မယ်၊ သဲ လဲ၊ ပိုဖီးလ်ရှိသွားအောင် ပိုမူးအောင် ABC သောက်လိုက်၊ ” ဟု ပြောရင်း ပုလင်းတလုံး ကို ဖွင့်ရင်း မိနိးမ ပါးစပ်ကို တေ့ပေးလိုက်လေ၏ အစပထမ သူမ က ငြင်းဆန်သေးသော်လည်း ဒီနေ့တော့ အမူးသောက်ပြီး ကဲသည့် အရသာ ခံစားကြည့်ဦးမယ်…ဆိုသာ တကြိုက်ပီး တကြိုက် မော့လိုက်လေ၏၊ ပုလင်း တဝက်ခန့်ရှိသော်..ရွှေရည် ချာချာ လည်စ ပြုလာပြီ၊ မောင်ဇော် လဲ ဘာဂျာပေးရာ မှ ရပ်ပြီး သူ့မိနိ်းမ၏ စောက်ဖုတ် ထဲသို့ လီးနှင့် တရမ်းကြမိး ထိုးချလိုက်တော့သည်၊ အရည်တွေ ရွှဲနစ်နေတော့ သာသာယာယာပင် ဝင်သွားသည်၊ တဖုန်းဖုန်း မြည်အောင် ဆောင့်ရင်း ရွှေရည်ကို တိုက်ရသေးသည်၊ လိုးရင်း တန်းလန်း ဧည့်ခန်းထဲ ခေါ်သွားသည်၊ အိပ်ခန်းထဲက ခိုးကြည့်နေမည့် ယောက္ခမကြီး မြင်အောင် ဖြစ်သည်၊ ရွှေရည်ကား မူးနေပေမယ့် မသွားချင်ကြောူ်း ငြင်းဆန်သည် ” လာပါ၊ မိနိးမရဲ့၊ အမေ မရှိပါဘူး၊ ဘာမှ ရှက်မနေနဲ့ ” ဟုပြောရင်း တဖုန်းဖုန်း မြည်အောင် ဆောင့်လိုက်သည်၊ လိုးလိုက် သောက်လိုက် နှင့် နောက်ဆုံး မိန်းမဖြစ်သူလဲ ချာချာလည်အောင် မူးပြီး မထနိုင်တော့ ၊ ဧည့်ခနိး က ကော်ဇော်ပေါ်မဖှာပင် ဖလက်ပြသွားချေသည် ၊ မိနိးမမှောက်သွားချက်က မျက်လုံးပင် မဖွင့်နိုင်တော့ သတိတော့ လွတ်လောက်အောင် မဖြစ်သေး… မောင်ဇော်လဲ ယောက္ခမ အိပ်ခန်း တံခါး ကို ဝုနိးကနဲ ဆွဲဖွင့်ရင်း ” လာခဲ့ဦး၊ တချီလောက် ရွှေရည်ရှေ့မှာ လိုးကြရအောင် ” ” မသင့်တော်ပါဘူး၊ သားရယ်၊ မလုပ်ပါနဲ့ အဲလို ” ” လာပါဆိုဗျာ၊ ခဗျားကလဲ စောက်စကားများလိုက်တာ ” ဟုပြောရင်း အကျီ င်္ကို လှမ်းဆွဲရင်း ခေါ်လိုက်၏။
ဒီသမက် နှင့်တော့ မရ၊ မိမိ လန့်မိသည်၊ မတော် သူ ခိုင်းတာမလုပ်ရင် ဗီဒီယို တွေ ဖြန့်ရင် အရှက်ကွဲရချည်ရဲ့…ဟု တွေးရင်း ဒေါ်နီလာမှ သမက်ခေါ်ဆောင်ရာ သို့ အသာတကြည် လိုက်ခဲ့လေတော့၏၊ သမီးနား ရောက်သော် မပြောမဆိုနှင့် မောင်ဇော်က မိမိ ထဘီ ကို ချွတ်ချလိုက်၏၊ လွန်ခဲ့သည် သုံးနာရီခန့်ကမှ အလိုးခံလိုက်ရသဖြင့် အနည်းငယ် မိမိမှာ နာနေသေးသော်လည်း သမက်လီးကြီး က အစွမ်းကုန်တောင်လျက်၊ အတော်လည်း နှာထန်တယ့် အကောင်ဘဲ…ဟု ဒေါ်နီလာ တွေးမိလေ၏၊ .. ယောက္ခမ ၏ ထဘီ ကို ချွတ်ချပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်၏ စောက်ဖုတ်နှင့် ဖင်ကို သုံးချက်လောက် ကလိပေးလိုက်ရုံရှိသေး… စောက်ရည်ကြည်များ ကျဆင်းလာလေ၏ အဘွားကြီး တော့ ထနေပြီ..ဟု တွေးရင်း..မောင်ဇော် လဲ စောက်ဖုတ်ပေါက်ဝ သို့ လီးတေ့ပြီး လိုးချလိုက်လေ၏၊ ပြွတ်..ကနဲ မြည်သံ နှင့် အတူ သမက်၏ လီးကြီးမှာ ယောက္ခမ စောက်ဖုတ်ထဲ တနေ့တာ အတွင်း နှစ်ကြိမ်မြောက် အဖြစ် ဝင်ရောက် သွားပြန်ပြီဖြစ်သည်၊ နို့တွဲ ကြီး နှစ်ခု ကို ပွတ်ပေးလိုက်၊ ဖင်ပေါက် ကို ကလိပေးလိုက် နှင့် မောင်ဇော် လဲ ဒေါ်နီလာ အဖုတ်ကြီး ကို အားသွန်ခွန်စိုက် ချပေးနေတော့၏ တဖြည်းဖြည်း နှင့် ရှေ့ကို တိုးသွားစေပြီး..နီလာအိပ်နေသော နေရာ ထိ ရောက်အောင် မောင်ဇော် လိုးရင်း သွားလိုက်သည် နီလာ့ ပေါင် နှစ်ဖက်ကို ဖြဲပေးပြီး ဒေါ်နီလာ၏ ခေါင်း ကို တွနိးကာ.. လိုးဆောင့်ရင်း… ” အန်တီ…အန်တီ့ သမီး ကို ယက်ပေးလိုက်ပါလား” ” မလုပ်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ် သားရယ်၊ သူသိသွားရင် ရှက်စရာကြီး ” ” မသိပါဘူးဗျ၊ သူက မူးလို့ မှောက်နေပြီ၊ လုပ်ပါ အန်တီရယ်၊ “ဟု ပြောရင်း ဒေါ့်နီလာ ဖင်ပေါက်ထဲ လက် ထည့်၊ ကျန်လကိတဖက်က နို့ကြီးကို ချေပေးရင်း တဖုန်းဖုန်း မြည်အောင် ဆောင့်ပေးလိုက်၏၊ . ဒေါ်နီလာလဲ “…အင်း…အား..ရှီး…ဟုတ်..ပါ..ပြီ သားရယ်၊ လုပ်ပေးပါ့မယ်၊ ခပ်သွက်သွက်လေး ထပ်ဆောင့်ပေး ” ဟု ပြောရင်း သမီး ဖြစ်သူ ပေါင်ကြားသို့ မိမိ မျက်နှာ ကို အပ်လိုက်လေတော့သည်..ပြီး။
ဒို့အရေး ဒို့အရေး” ဆိုတဲ့အသံတှေ စကျရုံအပွငျမှာ ဆူညံနသေညျ စကျရုံမှ ဝနျထမျးအမြားစုရဲ့ တောငျးဆိုမူမြားနဲ့ ဟဈအျောနကွေခွငျးဖွဈသညျ ဒီအခြိနျမှာ စကျရုံတှငျးမှာကနျြခဲ့တဲ့ ဝနျထမျးအနဲစုကတော့ အလုပျတှမေလုပျဖွဈတော့၍ စကျရုံဆငျးခြိနျကိုသာ ထိုငျစောငျ့နကွေရသညျ ကနြျောတယောကျကတော့ ဖုနျးတဈလုံးနဲ့အလုပျမြားနတေယျလေ အကွောငျးကတော့ စကျလိုငျးဘကျမှ အသကျ၂၃နှဈအရှယျ တဈခုလပျမလေး အေးမမကို ဖှနျကွောငျနတောပငျ မကျဆဂြော မှာ အပွနျအလှနျစာပို့နတော ခရီးအတျောရောကျနပေါပွီ စကျရုံတဈခုထဲမှာ နှဈနဲခြီပွီး ခငျမငျနကွေသူတှမှေိ့ လိုရငျးကို ခပျမွနျမွနျပငျရောကျခဲ့ကွတယျပေါ့. ကိုကွီးကလညျး မလှနျဘူးလား ဒီနမှေ့ တှဲကွမယျပွောပွီး ခုညနတှေကွေ့ရအောငျဆိုတော့”ဟာအခြိနျတှအေမြားကွီးပေးနစေရာလိုလို့လား အေးလညျးလိုခငျြနတော ကိုသိတယျ ကိုလညျးလိုခငျြနတောပဲလေ အာ့တော့ ခုညနအေလုပျဆငျးတာနဲ့. တှကွေ့ရအောငျပါ ကို စကျရုံညာဘကျဒေါကျ့မှာ ဆောငျ့နမေယျနျော” ဒီနတေ့ော့မရလို့ပါ စကျရုံအခွနေကေို အိမျကလညျးသိနတေော့ အိမျပွနိနောကျကရြငျ လူကွီးတှေ စိတျပူနကွေမှာ နောကျရကျမှ တှကွေ့ရအောငျနျောကို” ပွီးရောကှာ […]